कसरी बन्छ कोकाकोला ? संसारमा २ जनालाई मात्र थाहा छ ! को हुन् उनीहरु ? - ePosttimes
Homeविजनेशकसरी बन्छ कोकाकोला ? संसारमा २ जनालाई मात्र थाहा छ ! को हुन् उनीहरु ?
२ मंसिर २०७६, सोमबार ०४:३० विजनेश 0
एजेन्सी / अमेरिकाको चर्चित सफ्ट ड्रिङ्क निर्माता कम्पनी ‘कोका कोला’को इतिहास पनि पुरानो नै छ। जर्जियाको एटलान्टाबाट सुरू भएको यस कम्पनीले आज संसारभरी नै आफ्नो कारोबारलाई फैलाउन सफल भएको छ। नेपालमा पनि कोका कोलाको ठूलो बजार स्थापित छ। कोका कोलाले दुनियाभरीकै सफ्ट ड्रिङ्क बजारमा खास स्वादको साथसाथै आफ्नो छुट्टै पहिचान पनि बनाएको छ।
140500cookie-checkकसरी बन्छ कोकाकोला ? संसारमा २ जनालाई मात्र थाहा छ ! को हुन् उनीहरु ?yes